Raisal Wasaaraha UK oo booqasho ku imaanaya Dalka Sweden Maalinta Bari
HomeWararka CaalamkaRaisal Wasaaraha UK oo booqasho ku imaanaya Dalka Sweden Maalinta Bari
May 10, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Wararka Sweden 0
Ra’iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa beri booqan doona Sweden, wuxuuna la kulmi doonaa Ra’iisul Wasaare Magdalena Andersson, ka dibna u safri doona Finland si uu ugala hadlo xaaladda ammaan.
Sweden ayaa Britain kala hadli doonta xaaladda siyaasadda amniga ee khatarta ah ee Yurub, iyo xiriirka labada dal. Labada dhinac ayaa la filayaa inay shir jaraa’id qabtaan gelinka dambe ee Arbacada. Sida uu sheegay TT.
Xog ay daabacday Aftonbladet ayaa sheegeysa in ujeedka kulanka uu yahay in la saxiixo heshiis lagu xoojinayo iskaashiga dhanka difaaca iyo amniga ee u dhaxeeya Sweden iyo Britain.
Heshiisku waxa uu la xidhiidhaa muddada raaci karta codsiga Iswiidhan ee xubinnimada Ururka NATO ee Waqooyiga Atlanta. Xogtan lama xaqiijin
Wakaalada wararka ee Finland STT ayaa sheegtay in Johnson uu booqan doono dalalka Sweden iyo Finland.
Booqashada Johnson ayaa ku soo beegantay maalin ka hor inta aysan Finland ku dhawaaqin go’aankeeda ku aadan xubinnimada NATO . Waxaa beryahan aad loo hadal hayey in dalalka Sweden iyo Finland ay u baahan yihiin dammaanad qaad amni oo ka yimaada dalalka waaweyn, haddii ay dhacdo in loo geysto weerar kasto oo Ruush ah, kadib marka ay dalbadaan xubinnimada.
Xoghayaha Difaaca Ingiriiska Ben Wallace ayaa booqasho ku tagay Finland usbuucii hore. Waxa uu ku celiyay mowqifka dalkiisa ee ah in Britain ay difaacdo labada dal ee Finland iyo Sweden haddii uu Ruushku weeraro, iyadoo aan loo eegin xubinnimada labada waddan ee NATO.